မိန်းမကိုယ် အနံ့ဆိုးထွက်ခြင်း ၊ အဖြူစွဲခြင်း နဲ့ ယားယံခြင်းတွေကို ပျောက်ကင်းစေနိုင်မယ့် အိမ်တွင်းနည်းများ …! – Tameelay
မိန်းမကိုယ် အနံ့ဆိုးထွက်ခြင်း ၊ အဖြူစွဲခြင်း နဲ့ ယားယံခြင်းတွေကို ပျောက်ကင်းစေနိုင်မယ့် အိမ်တွင်းနည်းများ …!
တမာရွက်က ပိုးသေစေတဲ့ အစွမ်းသတ္တိရှိပြီး ပိုးဝင်ရောက်ခြင်းနဲ့ အနံ့ဆိုးထွက်ခြင်းတွေကို ကူးစက်နိုင်ပါတယ် ။ တမာရွက်အချို့ကို ဆေးကြောပြီး အိုးထဲထည့်ကာ ရေအနည်းငယ်ထည့်၍ ဆူပွက်သည်အထိ ပတ်ပါ ။ ထို့နောက် အအေးခံထားလိုက်ပါ ။ ရလာသော တမာရွက်ပြုတ်ရည်ဖြင့် မိန်းမကိုယ်တဝိုက်ကို နေ့စဉ် ပုံမှန် ဆေးကြောပေးပါ။
– လိင်ဆက်ဆံပြီးနောက် ရေဖြင့်သာဆေးကြောပါ ။
သို့မဟုတ် အမွှေးမပါသော ၊ နူးညံ့သော ဆပ်ပြာဖြင့်သာ ဆေးကြောပါ။
ရေဆေးပြီးလျှင် ခြောက်အောင်ပြန်သုတ်ဖို့ သတိပြုပါ။
Credit : www.shweinnlay.com
တမာရှကျက ပိုးသစေတေဲ့ အစှမျးသတ်တိရှိပွီး ပိုးဝငျရောကျခွငျးနဲ့ အနံ့ဆိုးထှကျခွငျးတှကေို ကူးစကျနိုငျပါတယျ ။ တမာရှကျအခြို့ကို ဆေးကွောပွီး အိုးထဲထညျ့ကာ ရအေနညျးငယျထညျ့၍ ဆူပှကျသညျအထိ ပတျပါ ။ ထို့နောကျ အအေးခံထားလိုကျပါ ။ ရလာသော တမာရှကျပွုတျရညျဖွငျ့ မိနျးမကိုယျတဝိုကျကို နစေ့ဉျ ပုံမှနျ ဆေးကွောပေးပါ။
– လိငျဆကျဆံပွီးနောကျ ရဖွေငျ့သာဆေးကွောပါ ။
သို့မဟုတျ အမှေးမပါသော ၊ နူးညံ့သော ဆပျပွာဖွငျ့သာ ဆေးကွောပါ။
ငရုတ်သီးစိမ်ဆိုတာနဲ့ တစ်ရှူးရှူး မျက်ရည်တရွှဲရွှဲ ဖြစ်စေမယ့်အစားအစာလို့သာ မြင်ကြပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ကြိုက်နှစ်သက်သူ အဖို့တော့ ခံတွင်းမြိန်စေတာပေါ့။ အမှန်တကယ်ဆို ငရုတ်သီးစိမ်းဟာ ရေဓာတ်ပါဝင်ပြီး Cholesterol ကင်းတဲ့ အတွက် ကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်းမွန်စေပါတယ်။ ငရုတ်သီးစိမ်းထဲမှာ ဗီတာမင် C ၊ ဗီတာမင် B6 ၊ ဗီတာမင် …
ကျီးပေါင်းရောဂါအတွက် တန်ဖိုးရှိလှတဲ့ ဆေးနည်း ( ၂ )နည်း (မျှဝေပေးလိုက်ပါသည်)
ကျီးပေါင်းရောဂါအတွက် ဆေးနည်း (2)နည်း ဘယ်ဘက်လက် မလှုပ်နိုင်အေင် ခံစားလာရသဖြင့် ကိုယ်တစ်ခြမ်း လေဖြတ်သလိုဖြစ်လာသည့် ကိုအဏ္ဏ၀ါလိုင်းသည် ဆရာဝန်နှင့်ကုသသော်လည်း မပျောက်သဖြင့် မြန်မာတိုင်းရင်းဆေးနည်းဖြင့် အနှိပ်ခံကြည့်ရာ ကျီးပေါင်းရောဂါဖြစ်နိုင်ကြောင်း၊ ဓါတ်မှန်ရိုက်ကြည့်ရန် အကြံပေးသဖြင့် ရိုက်ကြည့်ရာ လည်ဆစ်ရိုးတွင် ကျီးပေါင်းတက်နေကြောင်း တွေ့ရှိရသဖြင့် မိတ္ထီလာဆေးရုံသို့ တက်ရောက်ကုသခဲ့သည်။ အရိုးအဆစ်တို့တွင် …